जापानमा रहेको रिअल इस्टेट कम्पनि संगको अन्तरबार्ता : जापानमा बस्ने बिदेशीहरुको लागि एउटा नया हाउजिङ्ग सर्भिस कम्पनि | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Uncategorized > जापानमा रहेको रिअल इस्टेट कम्पनि संगको अन्तरबार्ता : जापानमा बस्ने बिदेशीहरुको लागि एउटा नया हाउजिङ्ग सर्भिस कम्पनि
जब हजुर जापानमा बस्ने मनस्थिति बनेर आउनु हुनेछ, हजुरको पहिलो समस्या भनेको काम खोज्नु भन्दापनि आफुलाई मिल्दो जुल्दो बास खोज्नु हो। राम्रो जापानिज बोल्न नआएको खण्डमा हजुरले साधारण ईन्टरनेट पनि सेट गर्न सक्नु हुने छैन। नाथन जापानमा बस्ने एक अमेरिकी नागरिक हुन्। उनि जापानमा केहि वर्ष यता बस्दै आई जापनको रीअल इस्टेट कम्पनिमा द्वाभासेको रुपमा काम गर्दै, जापानी भाषा बोल्न नआउने नागरिकहरुको लागि पुल बनिरहेका छन्। जापान इन्फोको मदतले मैले उनि संग गत हप्ता अन्तरबार्ता लिने मौका पाए। मेरो अन्तरबार्ताको बिषय थियो उनले कसरि जापान बस्न आएका बिदेशीहरुको सहयोग गर्दै छन्।
Nathan shares his insight with me regarding the challenges and features of living in Japan.
नाथन संगको रोचक अन्तरबार्ता
हजुरले किन कामको लागि जापान रोज्नु भयो ?
म पहिले देखि नै जापनमा काम गर्नेछु भन्ने सोच राख्दथे। मेरो बुवा ४० वर्ष पहिले जापानमा यहाँका नागरिकलाई अंग्रेजी पढाउनु हुन्थ्यो। अमेरिका फर्केपछि पनि मेरो बुवालाई जापानको वस्तुहरु निकै रोचक लाग्दथ्यो। तेही भएरहोला मलाई पनि जापान मन पर्न थाल्यो। म पनि जापान देश पक्कै रोचक छ, त्यहाँ गैर बुवा जसरि अंग्रेजी पढाउछु भन्ने सोच आउन थाल्यो। यहाँ आएपछि मलाई जापान निकै मन पर्न थाल्यो र म अहिले सम्म पनि यहि छु। तर अंग्रेजी पढाउदै चाही छैन।
अंग्रेजी भाषा बोल्ने देशमा मानिसहरुको लागि ईङ्ग्लिश टिचिङ्ग जब, एउटा सजिलो बाटो बनेको छ है ?
पक्कै पनि यो सबै भन्दा सजिलो मध्यम हो। हजुर जापान थोरै समयको लागि आऔने भएता पनि वा लामो समयको लागि आए पनि ईङ्ग्लिश टिचिङ्ग सजिलै पाइने काम हो। तर यहाँको जिबन यापनमा ढल्नु भने अर्को पाटो हो, जुन मैले काम पाउनु भन्दा कठिन पाएको छु। सुरुमा भाषा शिक्षकको रुपमा केहि वर्ष काम गरि यहाँ राम्रो संग भिजे पछि हजुर पक्कै पनि अरु प्रोफेसनमा पनि जना सक्नु हुनेछ।
के तपाई पनि सुरुमा अंग्रेजी भाषा शिक्षक बन्ने मनस्थिति लिएर जापान आउनु भएको हो ?
हो। म सुरुमा अंग्रेजी पढाउने भनेरै जापान आएको थिए। मलाई त्यो प्रोफेसन सुरुमा निकै रमाइलो पनि लाग्दथ्यो। मलाई लाग्थ्यो कि म यो काम धेरै लामो समय सम्म गर्ने छु। म एकाईवा (ईङ्ग्लिश कन्भरसेसन स्कुल)मा काम गर्दथे र त्यहाँ निकै रमाइलो पनि लाग्दथ्यो। तर केहि समय पछि मा आफु त्यो कामको लागि बनेको हो जस्तो लागेन। त्यहाँ केहि समय काम गरेर म साना बच्चाहरु पढ्ने स्कुल पधाउन थाले। त्यो कम्पनि सानो भएता पनि काम निकै रमाइलो थियो। तर मलाई २ देखि ३ वर्षको भुराहरुलाई कसरि पढाउने भन्ने कुनै ज्ञान थिएन त्यसैले मैले त्यहाँ पनि धेरै लामो सम्म काम गरिन।
अहिले हजुर रिअल इस्टेटमा काम गर्दै हुनु हुन्छ, यो कसरि थाल्नु भयो ?
मैले कलेजमा अर्थसास्त्र पढेको थिए। मलाई बिजनेस र कर्पोरेट वर्ल्डपनि निकै मन पर्दथ्यो। त्यसैले मैले यदि ईङ्ग्लिश पढाउन सकिन भने यस्तै काम गर्नेछु भन्ने सोचेको थिए। तर मैले रिअल स्टेटमै काम गर्छु भएर कुनै तयारि गरेको थिइन। त्यो समयमा मैले यो कम्पनिको बिज्ञापन देखे अहिले यसैमा छु।
यो कम्पनिमा हजुरको के कस्तो जिम्बेवारी हुने गर्दछ ?
म अहिले काम गर्न थालेको गाईजिनपोट हाउजिङ्ग कम्पनि नया हो। यसको प्यारेण्ट कामपनि फुजी हो। जिम्बेवारी भन्नु पर्दा हामीले जापानमा आएका बिदेशीहरु यदि कुनै अपार्टमेन्टमा बस्न चाहन्छन भने उनिहरुकोलागी त्यसको व्यस्था मिलाउने हो। त्यति मात्र नभएर उनिहरु नया ठाउमा सरेपछि आइपर्ने हरेक किसिमको समस्या समाधान गर्नु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुदछ। कहिले काहि हामीले पनि पहिलो चोटि फेस गर्नु परेको समस्या आउन सक्दछ। त्यस्तो समयमा पनि मा र मेरो टिमले निकै मिहेनतगरेर कसरि त्यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने प्लानिङ्ग गर्दछौ। ईङ्ग्लिग्स पढाउन आउनु भएकाहरुले जापानी भाषा पढेर आउनु नभएकोले उहाहरुलाई निकै समस्या पर्दछ। पानिको बिल, बत्तिको बिल देखि लिएर हजुरको रुममा आउने सबै जापानीमा लेखिएको नोटिसहरु हामी हाम्रो गाइजिनपोट हाऊजिङ्ग सर्भिसले सबै हेर्ने छ र उहाहरुलाई उचित सल्लाह दिनेछ। उहाहरुले हामीलाई सिधै ईङ्ग्लिशमा कल वा ईमेल गर्न सक्नु हुनेछ।
जापान आएपछि हजुरले काम वा काम भन्दा बाहिर कस्ता कल्चरल भिन्नता फेस गर्नुपर्दछ ?
मलाई लाग्दछ मेरो यो भोगाई जब र जिबन दुबमा मिल्न जादछ। जापानमा अमेरिकामा भन्दा कामहरु ढिलो हुने हुदछ। पक्कै पनि यहाँ धेरै कुराहरु सहज छन्। तर पनि मलाई लाग्दछ जापानमा ब्युरोकेसी निकै बलियो छ। त्यसैले यहाँ कुराहरु धेरै प्रोसेस मार्फत हुने गर्दछ। तपाई आफै हेर्नुन जापानमा अझै हामी फ्याक्स प्रयोग गर्दछौ। म सोच्छु किन यो फ्याक्स गर्नु परेको होला। यसले कामहरु निकै ढिलो बनाउदछ।
जापानमा फेस गर्नुपर्ने सामाजिक समस्या पनि बताउनुस न ?
जब म जापानमा आए मलाई अंग्रेजी भाषा बोल्न मन थिएन। मा नया देशमा आएको मान्छे। अंग्रेजी त बोल्न आईहाल्छ त्यसैले मलाई जापानी भाषा सिक्न मन लागेर आउथ्यो। मलाइ साथीहरु पनि नया जापानी साथिहरु बनौन मन लाग्दथ्यो। तर मैले अहिले आएर के थाहा पाए भने आफु संग मिल्ने मान्छे हो भने जो सुकै संग मित्रता गर्नु होस् फरक पर्ने छैन। अहिले मलाई मेरो सबै भन्दा सपोर्ट गर्ने मान्छे मेरो गर्लफ्रेन्ड होला तर पनि मा सबै संग हासी खुसि बोल्दछु।
धन्यबाद हजुरलाई आफ्नो अमुल्य समय दिनु भएकोमा , यति भनेर म आफ्नो अफिस फर्किए।